Izitifiketi eziqinisekisiwe ze-CompTIA | I-CompTIA Career Pathways
Yiziphi izitifiketi ze-CompTIA Stackable?
I-CompTIA Yengqalasizinda Yomsebenzi Wendlela
I-CompTIA Umsebenzi Wokuphepha Kwe-Cybersecurity
Ingabe wena njengamanje unesiqiniseko se-CompTIA Stackable?
Izitifiketi eziqinisekisiwe ze-CompTIA ziqhutshwa phakathi no-2018 futhi zibona ochwepheshe abafeze ukuqinisekiswa okuhlukahlukene kwe-CompTIA.
Isitifiketi ngasinye se-Stackable sishintshwe engxenyeni ethile ngaphakathi kwe-IT, ebonisa izinga elijulile lwazi nolwazi. Zithatha lezi zakhiwo zombili ezakhelwe i-CompTIA Career Pathways:
Izitifiketi eziqinile ze-CompTIA zihlukaniswa ngokungeziwe kumazinga okuzimela ezizimele:
Isazi: Abangcweti be-IT abangenele nge-0-2 iminyaka yokuhlangenwe nakho
professional: Ochwepheshe bezinga le-IT abaneminyaka engu-2-5 abanolwazi
Uchwepheshe: Uqashwe ochwepheshe be-IT abaneminyaka engu-5 +
Kulesi sihloko, sizoxhuma kwi-CompTIA Infrastructure kanye Nokusebenza Kwe-Cybersecurity Pathways, ukuphenya izitifiketi ze-Stackable kufinyeleleke ezingeni ngalinye.
Ukuqhubekela phambili ngokusebenzisa i-CompTIA Infrastructure Career Pathway kuvumela ulwazi ngezigaba eziningi zamakhono ngaphakathi kwe-IT. Njengoba usuka kusuka ku-Specialist kuya ku-Professional, uzokwakha amakhono okuthutha ngaphakathi kwendawo yokwakha ingqalasizinda ye-IT, ukwandisa ubuningi bezingxenye zobuchwepheshe ongasebenza ngaphakathi.
Izitifiketi eziqinisekisiwe ngaphakathi kule ndlela zitholwa ngokufeza umxube we-CompTIA A +, Network +, Security +, Server +, Linux + ne-Cloud + certifications.
04294 CompTIA Cert Badges_Specialist - I-CIOSCompTIA IT Operations Specialist (i-CIOS) - Thola i-A + ne-Network + futhi uzobonisa ukuqonda kwakho okuphakathi komkhiqizo nemishini edingekayo kwi-IT eqinisa izingxenye, nolwazi lokuthuthukiswa kwenethiwekhi.
04294 CompTIA Cert Badges_Specialist - CSSSCompTIA Special Support Specialist (CSSS) - Thola i-A + ne-Linux + ukuze ubonise ukuthi uqonda izinhlelo zokusebenza ze-IT nezidingo zokusebenza futhi ube nokuqonda okujulile kwezinhlaka zokusebenza ze-Linux.
04294 CompTIA Cert Badges_Specialist - I-CCAPCompTIA Cloud Admin Professional (CCAP) - Thola Inethiwekhi + ne-Cloud + ukuze ubonise ukuthi ufunda ngokusebenza kokubili kokuthuthukiswa kwefu nokuxhumana.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - I-CNIPCompTIA Network Infrastructure Professional (CNIP) - Finyelela inethiwekhi + neSeva + ukuze ubonise ukufaneleka kwakho kweseva nokuthuthukiswa kwenethiwekhi.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - I-CLNPCompTIA Linux Network Professional (CLNP) - Finyelela i-Network + ne-Linux + ukuze ubonise ikhono lakho ngokumelene nokuthuthukiswa kwenethiwekhi nezinhlaka zokusebenza ze-Linux.
Ukuqhubekela phambili ngokusebenzisa i-CompTIA Cybersecurity Career Pathway kuzobonisa ubuchule bakho obuhamba phambili ezindaweni ezihlukahlukene zokuphepha kwe-cybersecurity.
Ukulandela indlela kuzokuthatha kusukela ekuqaleni komphathi we-cybersecurity, okubonisa ukuthi ulungele ukusebenza kwezinye izingxenye eziphezulu ze-cybersecurity.
Izitifiketi eziqinisekisiwe ngaphakathi kule ndlela zithathwa ngokufezekisa ukuhlanganiswa kwezimvume ze-CompTIA sika-A +, Network +, Security +, CySA + ne-CASP.
Le ndlela izokhula kuze kube yi-50% yesibili ye-2018, ngokuthumela i-PenTest + - ukuze uthole idatha eyengeziwe, uphenye lo mhlahlandlela we-PenTest +.
04294 CompTIA Cert amabheji-I-CSISCompTIA I-Specialist Infrastructure Specialist (CSIS) - Finyelela i-A +, Inethiwekhi + noKhuseleko + futhi ubonise ukuqonda kwakho kwamanethiwekhi, ukuhlela i-PC, imishini - futhi ngaphezu kwamakhono okubavikela.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - I-CSCPCompTIA Secure Cloud Professional (CSCP) - Thola kokubili ukuphepha + ne-Cloud + ukuze ubonise ukuqonda kwakho kwefu emisha kanye namakhono adingekayo ukuze avikele amasha ngaphakathi kwebhizinisi.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - I-CSAPCompTIA Security Analytics Professional (CSAP) - Finyelela i-Security + ne-CySA + ukuze ubonise amandla akho okuhlukanisa nokuphendula ngezingozi zokuphepha ngokushesha njengoba kucatshangwa ngokuqoqa nokwaphula ulwazi.
I-CompTIA Network Vulnerability Assessment Professional (CNVAP) - Finyelela i-Security + ne-PenTest + ukuze ubonise ukuthi unezinto ezifanele ukuze uhlole izinhlaka zebhizinisi lakho lokukhubazeka kokuphepha.
I-CompTIA Network Security Professional (CNSP) - Finyelela i-Security +, i-PenTest + ne-CySA + ukuze ukhombise ukuthi unezinto ezifanele ezidingekayo zokuqeda ukuhlolwa kwamandla okungenawo amandla futhi zilungele ukuhola izabelo zokuhlolwa zokuphepha.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - I-CSAECompTIA Security Analytics Expert (CSAE) - Thola Ukuvikeleka, + i-CySA + ne-CASP ukuze ubonise ukuqonda okhethekile kokuphepha. Uzobonisa ukuphepha okuyinhloko kokuphepha, ukuhlolwa kokuphepha nokuphepha kwe-IT ngaphakathi kokusebenza.
I-COMPTIA Expert Infrastructure Expert (CSIE) - Thola Ukuvikeleka, + i-CySA +, i-PenTest + ne-CASP ukubonisa ukuqonda kwengcweti yengqalasizinda yokuphepha. Lesi sitifikedi se-stackable sivumela ukuhlolwa kokuhlolwa kokuphepha, ukuhlolwa kwe-infiltration nokwenza ukuphepha kwe-IT.
Uma kungenzeka ukuthi ubambe ngokuphumelelayo umxube wezitifiketi ezidingekayo, uzothola ngokusemthethweni isitifiketi se-CompTIA Stackable. Bhalisela i-akhawunti yakho yesitifiketi ukulanda futhi ubonise isitifiketi sakho esisha ngokushesha.
Sikumise ukuthi ungeze iphepuleli ethuthukile kuphrofayela yakho noma iphrofayli ye-LinkedIn ukuze ufake isimo sakho sobuchwepheshe obusha.
Ngethuba lokuthi ufezile isitifiketi sakho ngaphambi kokuba i-CompTIA ihlinzeke izidingo zokuvuselelwa kabusha, ungathola Izitifiketi zakho eziqinisekisiwe ngokuqinisekisa kabusha ama-accreditations akho okwamanje.
Inkambo yakho yamandla esheshayo yokwandisa izitifiketi eziqinisekisiwe
Qedela isigamu sakho se-CompTIA isitifiketi esisheshayo kunokulungiswa kwendabuko. Lungiselela masinyane nge-Firebrand kwi-CompTIA evuselelwe futhi uzothola ukuvuma ekufundeni kwe-courseware ngokusemthethweni ngabafundisi abavunyelwe:
Izinsuku ze-CompTIA A + - 4
I-CompTIA Network + - Izinsuku ze-3
I-CompTIA Security + - Izinsuku ze-3
I-CompTIA Cloud + - izinsuku ezingu-3
I-Firebrand iyi-CompTIA Platinum Partner. NgoLwazi lwethu oluhlukile | I-Lab | Buyekeza isitayela sokufunda, uzofakwa ngaphakathi kwamamojuli amancane wezemfundo okungenani amahora angu-12 'ukulungiswa nsuku zonke.
Uzohlala esitokisini sethu esithuthukisayo sokufundisa, ngaphandle kokuphambene nosuku ngokuphila kwansuku zonke. Ngokufanayo uzohlala nokuhlolwa kwakho kwe-CompTIA (ama) okuqhubekayo okuvela eklasini lakho ekugxilweni kokuhlolwa kwe-Firebrand's Pearson View.